हामी समय वर्ण इस्राएलका बुझ्ने? | Apg29
इस्राएल राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापना र यì
अब हामी अब आफ्नो देश फर्केर यहूदीहरूले लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, यसलाई 70 वर्ष पहिले एक वास्तविकता भयो।
हामी यो के मतलब बुझ्ने?
हामी यो बुझ्न भने, यो हामी भविष्यसूचक वचन को समझ मा अस्वीकार गरिनेछ भन्ने हो। यो नाटकीय लाग्न सक्छ, तर यो वास्तवमा यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ।
त्यसैले यहाँ हामी मतलब। यसलाई अब अन्तिम 70 वर्ष त स्पष्ट अग्रिम मा बाइबलीय भविष्यवाणीहरू गर्ने पढ्न ती यो हुनेछ भनेर बुझे गरेको भविष्यवाणी गरिएको छ भएको छ।
यहाँ हामी मात्र भविष्यसूचक वचन देखे समय अवधि मसीही प्रचारकहरूको केही उदाहरण दिन हुनेछ।
को 1600s मा, एक अंग्रेजी चर्च नेता र theologian थियो यूहन्ना Owens, बस्थे। कि छैन समय यहूदीहरू आफ्ना देश फर्कन सक्ने आशा को एक glimmer मा थियो। यो बावजुद भविष्यवाणी यूहन्ना Owens निम्नानुसार:
"यहूदीहरूले तिनीहरू छरिएका छन्, र आफ्नो मातृभूमि फिर्ता ल्याए पृथ्वीका सबै भागबाट जम्मा हुनुपर्छ।"
प्रोटेस्टेन्ट लेखक पावलले Glegenhauver 1655 मा यो यस्तो लेखे: "आफ्नो देशमा यहूदीहरूको एउटा स्थायी फिर्ती सधैंभरि अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई असीमित प्रतिज्ञा मार्फत परमेश्वरले तिनीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ।"
हामी सय वरिपरि वर्ष केही उदाहरण हुनेछ। आफ्नो पुस्तक प्रकाशित 1912 मा अगस्ट Hedstrom दिनुभयो भविष्यवाणीहरूमा मा अध्ययन।
यसलाई मा तिनले यस्तो लेखे: "अन्तमा, यूटीआई टर्की साम्राज्यको समयमा एक स्वतन्त्र मुक्त राज्य, अर्थात् यहूदी राज्य, वा के भनिन्छ गरिनेछ हुन हुनेछ याद।"
को डेनिस मन्त्री सी Skovgaard-Petersen पुस्तक लेखेका , लक्षण र पटक यो 1919th प्रकाशित भएको थियो
यस पुस्तकमा लेखक यहूदीहरूले आफ्नो देशमा फिर्ता हुनेछ त्यसैले येशूले रिटर्न पहिले अभिव्यक्ति दिन्छ। उहाँले यो यस्तो लेखे:
"तर कुनै पनि मामला मा बाइबलीय सत्य रूपमा, इजरायल आध्यात्मिक vårbrytning आफ्नो देश भेला र छन् कि प्रभु आउँछ अघि छलफल हुनुपर्छ। अक्षरहरू यहूदीहरूले अझै प्यालेस्टाइनको सम्पत्तिको आउन छैन, पूरा छैन। "
यसबाहेक लेखे Skovgaard-Petersen: "यसकारण हामी यहूदीहरू येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि हुन र आफ्नो देश फर्कन पर्छ भनेर आशा गर्न सक्छौं।"
के अब तथापि नजिक आउँदै छ यो लागि आधारभूत भविष्यसूचक अवस्था पूरा गरिएको छ किनभने येशूले कुनै पनि समयमा फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ। हामी यो महसुस र यो नतिजा चड्नुहुन्छ?
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 03:49